Accueil > Gazetin'ny nosy > Christine Razanamahasoa
Miandry ny hanonganan’ny HCC azy
Ny zoma faha 20 may 2022 teo dia nitokana ny trano fiangonana kristianina izay naoriny ao amin’ny Antenimierampirenena ao Tsimbazaza ramatoa Razanamahasoa Christine izay filohan’ity andrimpanjakana ity. Nolazainy tamin’izany fa volan’izy mivady manokana no nanamboarany ity fiangonana “Chapelle” nomena ny anarana hoe “Nehemia”izay ao anatin’ny baiboly ity.
Tsy ampisalasalana ny ilazana fa nandika ny lalàmpanorenana ity ramatoa ity. Voalaza mazava tsara ao amin’ny andininy faha-2 ny lalàmpanorenana Malagasy ny fanonganany tena noho izany, na koa ny tsy maintsy hanonganan’ny HCC (Fahefana avo momban’ny lalàmpanorenana) azy noho io fahotana mahafaty vitany io. Efa fanonganana ny fanjakana ankehitriny no ataon’ity ramatoa ity ary fivadihana amin’ny filoham-pirenena tanteraka.
Raha tena fanjakana tan-dalàna i Madagasikara dia tsy maintsy mandray andraikitra mahakasika izao tsy fanajana ny lalàmpanorenana izao ny HCC.
Toa izao indrindra no voalaza amin’izany ao amin’nyandininy faha-2 ny lalàmpanorenana ny 10 desambra 2010:
“Ny fanjakana dia manamafy ny tsy fombany ny atsy sy ny aroa eo anatrehan’ny finoana samy hafa. Ny tsy fampifangaroana ny fitondram-panjakana sy ny finoana eto amin’ny repoblika dia miankina amin’ny foto-kevitra mikasika ny fisarahan’ny raharaham-panjakana sy ny fikambanam-pivavahana ary ny solontenany.
Ny fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana dia tena tsy mahazo mifampisababaka eo amin’ny sehatr’izy ireo tsirairay. Tsy misy mihitsy ny lehiben’Andrimpanjakana na mambra ao amin’ny governemanta afaka miditra any amin’ny ambaratongam-pivavahana iray, raha tsy izany dia azon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana atao ny manongana azy na heverina mametra-pialana avy hatrany amin’ny asany sahaniny izy.”
Marihina fa in-droa izao no nanorina “chapelle” tao amin’ny tanim-panjakana ity ramatoa ity. Ny iray voalohany dia eny amin’ny ministeran’ny fitsarana eny Faravohitra izay nantsoiny hoe ”Ezra”.
Tena fandikana sy fanitsakitsahana lalàmpanorenana no ataon’i ramatoa Razanamahasoa Christine ity ka andrasana izay hataon’ny HCC amin’izany satria mazava ny voalaza lalàmpanorenana io.